Shina: “tsy liana amin’ny resaka politika aho, ny vola irery ihany no mahaliana ahy” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Novambra 2019 3:53 GMT
Efa renao ve ilay fiteny manao hoe “Great Firewall” na ilay hoe “GFW” ho an'ny fanafohezan-teny (Rindrin'afo goavana)? Iza no hohenjehina raha sendra hafatra iray manorisory ianao manao hoe “Pejy tsy hita” matetika hita rehefa mitety Aterineto ao Shina? Imailaka iray vao nihodina tao anaty tranonkala tato ho ato, miantso an'ireo shinoa mpampiasa Aterineto mba hibodo ny Google, izay, ny lazain'ny imailaky ny mpanoratra, fa hoe manivana sy misakana ireo vaovao mahamay mikasika ny “Nosy Diaoyutai”, na ireo Nosy Senkaku, singan-tany iray ifandroritan'i Shina sy Japana. Manana tantara tsara amin'io olana io ny ESWN miaraka amin'ny fandikana manontolo ho amin'ny teny anglisy an'ilay imailaka.
Ireo marobe ela nihetezana tamin'ny fikirakiràna aterineto ao Shina, zatra ny fomba fisakanana ny aterineto, no mety voalohany hanamarika an'io hafatra io ho toy ny fiampangana sy fimenomenonana dia atao amin'ny Google, na ihany koa paikady fampiroboroboana fanararaotan-dratsy ampiasain'ireo mpifaninana amin'i Google, indrindra fa misy ny fifaninanana mahery vaika mikasika ny tsenan'ireo milina fikarohana ao Shina, satria tsy i Google fa ny Great Firewall lehibe najoron'ny governemanta no manao ny fanadihadiana, manara-maso sy mamerina hatramin'ny voalohany ny Aterineto rehefa misy fangatahan'olontsotra mandona ny fanairany.
An-dàlana ny adihevitra maresaka mikasika ny IdeasFactoryChina (itakiana ny fanoratana anarana), lisitra imailaka iray tazonin'ny SocialBrain Foundation (ampamoaka: ny mpanoratra ao dia mpikambana amin'ny fikambanana iray tsy mampidi-bola no sady koa mpampiantrano ny Tetikasa Fandikana ho amin'ny teny Sinoa ny GVO), mikasika ny fomba “fampiroboroboana” ny fiteny hoe GFW sy nanao izay hampalaza azy, izay azo raisina ho toy ny fepetra mialoha mba handresena azy. Indro Ny imailaka voalohany an'ny ID “Aether” (itakiana ny fanoratana anarana):
Oh rey olona, isika no nandrindrina ny tenantsika hisaraka amin'izao tontolo izao. Rindrin'afo dizitaly iray antsoina hoe Great Firewall no manakana antsika. Izay no marina…
Tsy ilaina ny mitabataba. Tsy mila rà. Tsy mila mamono. Ny hany ilaina ataontsika dia ny manambara ny feontsika am-pilaminana sy tsimoramora…
Tsy ho azo karohina ny Google. Eny, satria voakendan'ny tetikasa antsoina hoe Golden Shield ny tendan'ny Google. Sarony avokoa ny feontsika rehetra ary izay tiany hainoana ihany no alefany…
Tsy zavatra mahagaga ny karazana taratasy iray fiantsoana sy ny fitakiana tahaka izany ao anatin'ny tontolom-bolongana Shinoa, toerana mafàna iray ho an'ny fosafosa sy ny tabataba. Saingy tena mahaliana ireo fanehoankevitra nanaraka, izay mety mahasolo ny hevitry ny ankabeazan'ireo mpampiasa Aterineto mikasika ny olan'ny fanivanana:
Ireo fanehoankevitra an'i Yuk Hui (itakiana ny fanoratana anarana):
Betsaka ireo andrim-panjakana any ivelany no liana amin'ny politikan'ny Aterineto ao Shina. Saingy ao amin'ny firenena, tsy miraharaha azy io ny ankamaroan'ny olona. Manao tsinontsinona azy ireo sasany ary ny hafa kosa indray maneso. Hoy izy ireo tamiko: “Tsy misy dikany izany. Raharaha an-tokantranon'i Shina izany. Efa zatra an'izany izahay”… Marobe ireo mpampiasa aterineto (tsy voafetra fotsinyho hatreo amin'ireo mpampiasa Aterineto?) no manana tazo-nà fitiavan-tanindrazana sy nasiônalisma, tsy mahafantatra akory ny fahafahana hahazo fahalalana ary na dia ny lanjan'ny atao hoe fahalalahana mihitsy aza. Manelingelina ahy izany.
Ireo fanehoankevitra an'i Zola (itakiana ny fanoratana anarana):
Nitanàka aho. Safidy avy amin'ny fanirian'olontokana monja ve ireo teny fanalahidy nosivanin'ny GW sa fironana ideolojika voarindra tsara? Haintsika tsara fa goavana be ny fitetezana aterineto ary misy fomba marobe samihafa ahafahana manafina ny vaovao/torohay. Tsy misy zavatra mba ilaina ka azon'ny GW atao amin'ny resaka fiarovam-pirenena. Ny hany tombony dia ny fanakanana ny ankamaroan'ireo antonontonony mpampiasa aterineto tsy hahalala ireo tena sary marina na diso amin'ny tantara sasantsasany
Fanehoankevitra an'i CWHung(itakiana fanoratana anarana):
Aza adino, tsy taminà taila-na daomy no nandrafetana ny Antoko Kaominista ao Shina . Marobe ireo zavatra tsy afaka ho hitan'ireo olontsotra. Fanampin'izay, tsy mahasarika ahy ny resaka politika; ny vola irery ihany no mahasarika ahy. Noho izany, fampahatsiahivana iray monja: na dia ilay voalaza fa ezaky ny tsara sitrapo aza dia mety hifangaro aminà “firehana ratsy dia ratsy”. Mitandrema.
Nosafidiako ny làlana mankamin'ny fanaovana fandraharahana. Angamba mety mba ho ilay mahery indrindra ao Shina mahomby amin'ny hoavy ny iray amin'ireo anareo, saingy mandraka ankehitriny aloha, tsy manana fahafahana ianareo, tsy izany ve? Manaova zavatra izay azonao atao, avy eo ianareo afaka tonga miady hevitra momba ireo traikefa sy ireo tetikasanareo amin'ny ho avy; fa tsy adihevitra poakaty mikasika ny idealisma. Raha tsy azona tsara izay voalazako, azafady mba valio amin'ireto fanontaniana vitsivitsy ireto aho raha manam-potoana ianao: inona ny asanao ankehitriny? Efa mba nisy zavatra nataonao ilain'ny hafa ve ? Efa nanao ezaka ve ianao mikasika ny zava-misy ankehitriny eo amin'ny aterineto? Efa noraisinao ve ny andraikitrao ho an'ny fiarahamonina tsy mahafa-po?
Ny hoe tsy liana amin'ny politika aho dia tsy midika akory fa tsy miraharaha an'io aho. Fantatro fotsiny fa ho an'ireo fahafahako manokana sy ny sahan'asako, tsy afaka manova be loatra aho. Ny hany azoko atao dia ny mitandrina fotsiny an'ireo fananako sy manandrana mampiroborobo ny hajan'ireo Sinoa any anatin'ireo fandraharahàna ary mamorona tontolo mendrika kokoa mba hahafahan'ny olona manantelenta hanao fandraharahàna. Manaraka izany, hampiasa ny volako amin'ny fnaovana asa soa aho. Toy Izay no làlana nofidiako, ary ianao mba ahoana, ry namako?